မင်းရာဇာတို့ အသံဇာတ်လမ်းမှ အစပြုဖော်ထုတ်သူကိုယ်တိုင် ၀န်ခံလာခဲ့ပါပီ။ သူပြောပြတာတွေကတော့…….
မင်းရာဇာတို့ အသံဇာတ်လမ်းမှ အစပြုဖော်ထုတ်သူကိုယ်တိုင် ၀န်ခံလာခဲ့ပါပီ။ သူပြောပြတာတွေကတော့……. မင်းရာဇာနဲ့အတူရှိနေပါလျက် မင်းရာဇာပြေးနေပီဆိုပီးလိမ်ပြောတယ်။ မင်းရာဇာကသူကိုသတ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်တယ်လည်းပြောထားတယ်။ မင်းရာဇာကို အမှုဖွင်ထားတယ်ဆိုပီးတော့လည်း လိမ်ပြောတယ်။ အသက်ပြည့်လားမေးတော့ လည်းပြည့်တယ်ပဲပြောတယ်။ အက်ဆစ်နဲ့ပက်မပက်ကိုလည်းကျနော်သေချာမေးခဲ့ပါတယ် သူကမပက်ဘူးပဲပြောပါတယ်။ ကျနော်ပဲအသုံးမကျ လား အသုံးချခံရတာ… မှားသွားလား မှန်လားဆိုတာတောင် မသိတော့ပါဘူးဗျာ။ နောက်တခါသူများကြားထဲဝင်မပါမိအောင် နေပါ့မယ် ခလေးမလေးနဲ့မိဘတွေအပေါ်အထင်လွဲမှား ပြောမှားဆိုမှားရှိခဲ့ရင် […]
အိမ်ပြန်ချင်ပြီ ကိုကို …မြန်မာနိုင်ငံက ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်
အိမ်ပြန်ချင်ပြီ ကိုကို … ဖခင်ဖြစ်သူက ပေါက်ခေါင်းမြို့မှာ ဒုဦးစီးမှူးမိခင်ဖြစ်သူက ရန်ကုန်က ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံမှာ သူနာပြုသားနဲ့ သမီးက မိခင်နဲ့အတူ ရန်ကုန်မှာ အတူနေပြီးကျောင်းတက်နေကြတယ်။ တစ်ယောက်တစ်မြို့ အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ မိဘနှစ်ဦးဆီမှာ ကလေးတွေက တစ်လှည့်စီ လိုက်နေကြရတယ်။ မိဘတွေက သိပ်မချမ်းသာပေမယ့် သာမန်ထက်သာတဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစုလေးပေါ့။ […]
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှ သားမယာပြုကျင့်ရန် နှိပ်စက်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကြောင့် ရွာသူရွာသားများမကျေနပ်ဖြစ်ပီ လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ် ရုပ်သံ
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှ သားမယာပြုကျင့်ရန် နှိပ်စက်ကြိုးပမ်းခဲ့မှု ကာယကံရှင်မိန်းကလေးမှ ဖြစ်စဉ်များပြောပြ။ရွာသူရွာသားများမှ ကျောင်းကို ဝိုင်းထားပြီး လူဝတ်လဲဖမ်းဆီးရန် အော်ဟစ်တောင်းဆို။ ဧပြီ (၈) AlinnMyay(အလင်းမြေ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ ဓနုံးကျေးရွာအုပ်စု ရွှေရပ်တော်ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှ ဧပြီ(၆)ရက် နေ့လည်ပိုင်းက ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းအတိုင်း မန္တလေးမြို့တံခွန်တိုင်ဈေးကို ဈေးဝယ်သွားတဲ့ အသက် ၂၀ […]
ရက်စက်စွာ အက်စစ်ဖြင့်ပက်ခံလိုက်ရသော 14နှစ်သမီး အိမ်ဖော်မလေးကို သနားလို့ ၀န်းရံကူညီကြပါပီ။
The voice Myanmar မှ သတင်းထောက် ‌ကိုအေးမင်းသူရဲ့ သတင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အသီးသီးက ဝိုင်းဝန်းကူညီရန် မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံသို့ ရောက်လာကြပါတယ်။ မင်းရာဇာအိမ်က အိမ်အကူကလေးမလေး က လက်ရှိ အသက် ၁၅နှစ်မပြည့်သေးပါ။ အသက် ၁၁နှစ်ထဲက အိမ်အကူလုပ်နေသူ လိမ္မာရေးခြားရှိလို့ ကလေးမလေးမိဘများထံမှ မွေးစားဖို့အထိ အိမ်ရှင်က […]
WOMEN POWERMENT မှဒေါ်စောခင်သူဇာ (ခ) ဒေါ်ခင်သူဇာ တို့မှ သတင်းအကျဉ်းချုပ် ရရှိပြီဖြစ်ပါသည်
WOMEN POWERMENT မှဒေါ်စောခင်သူဇာ (ခ) ဒေါ်ခင်သူဇာ တို့မှ သတင်းအကျဉ်းချုပ် ရရှိပြီဖြစ်ပါသည် အလှူခံ အမြတ်ထုတ်လိုသူမှအပ ပြည်သူ အပေါင်းဝန်းရံပေးကြပါ…။ အသံဖိုင်၊ အိမ်ဖော်၊ မင်းသား၊ ဇာတ်လမ်းတွဲမှ သတင်းတစိတ်တပိုင်းကို သာယာဝတီထောင်ထွက်နိုင်ကျဉ်းဟောင်း ယခင် ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ဒေါ်လေးလေးမွန် နှင့် WOMEN POWERMENT မှဒေါ်စောခင်သူဇာ […]
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာနှင့်ဇနီးဖြစ်သူက အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို အက်စစ်ဖြင့်ပက် …
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာနှင့်ဇနီးဖြစ်သူက အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို အက်စစ်ဖြင့်ပက် … မင်းရာဇာလင်မယားမှ အိမ်ဖော်မိန်းကလေးရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို အက်ဆစ်နဲ့ ပတ်ထားခံရပုံပါ ဒီလင်မယားရဲ့ လူစိတ်မရှိ အင်မတန်ယုတ်မာကောက်ကျစ်မှုကို မခံရပ်နိုင်ဖြစ်တာကြောင့်ရော ဟိုနွားလေး Han Nyein Oo ဆိုတဲ့ကောင်က အိမ်ဖော်ကောင်မလေးက သိန်း ၁၀၀ ငွေညှစ်တာမရလို့ လိမ်လည်တိုင်ကြားတာလို့ ပြောတာကြောင့်ပါ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထား […]